Microtube oo loo yaqaan 'Cryogenic Microtube'
Tuubbooyinka CRIBITION cryogenic-ka ayaa lagu dabaqi karaa keydinta tijaabooyinka bayoolojiga ah sida alaabada sheybaarka la iska tuuri karo, oo laga soo saaray polypropylene tayo sare leh. Laba nooc oo tuubbo dun ah ayaa loo heli karaa kaydinta fijaanrada iyadoo lagu saleynayo duruufaha: dunta gudaha iyo dunta dibedda. Weelasha 'Cryogenic vial s' waxay awoodaan nidaamka keydinta heerkulka ugu hooseeya -196 ℃. Giraan silikoon ah ayaa lagu dhejiyaa daboolka si looga hortago faddaraynta ka dhalanaysa dheecaanka daadanaya taas oo aakhirka xaqiijiso amniga muunadaha ku jira weelka cryogenic.
Gelinta koofiyad midabbeysan ayaa lagu heli karaa sagaal midab si ay uga dhigaan tuubooyinka weelka cryogenic fududaanta in la garto. Aagga calaamadeynta iyo qalin-jabinta waxaa si cad loogu daabacay dusha sare ee tuubbada loogu talagalay dadka isticmaala calaamadeynta iyo hagaajinta. Dhammaan fijaannada 'sorfa cryogenic' waxaa lagu soo buuxiyay boorsooyin leh nadiifin, RNase-la'aan, DNase-la'aan iyo non-pyrogenic.
1.Tani taxane ah waxay soosaaraysaa alaabada ceyriinka ee polypropylene-hufnaanta sare laga keeno, waxayna u adkeysanayaan -80 ~ 121 ℃. Naqshadeynta daboolka meeraha ah, kahortagga O-giraanta aan sunta ahayn si looga hortago daadashada. Markaad keydinayso shaybaarka, ma haboona in la buuxiyo si looga fogaado qarxinta tuubada. Taxanaha alaabtan waxay leeyihiin saddex qeexitaan oo kala ah 0.5ml, 1.5ml iyo 2.0ml, waxaana la heli karaa 7 dabool oo midab leh.
Jirka tuubadu wuxuu ka samaysan yahay shey polypropylene leh heer-kul wanaagsan oo iska caabbin ah si sheyga u ahaado mid deggan heerkulkiisu hooseeyo.
3.Can u adkeysan karaa heerkulka sare iyo jeermiska ka dhasha nadaafadda sare.
Jirka tuubada waxaa lagu dooran karaa ama aan lahayn calaamado qalabayn.
5.Ma jiro enzyme DNA / RNA, ma leh DNA bini aadam, ma leh endotoxin.
6.Waxaa jira silsilad giraan silikoon ah oo udhaxeysa dunta daboolka tuubada wax lagu keydiyo ee meertada ah iyo jirka tuubada, taas oo hubin karta waxqabadka xiritaanka dhammaan noocyada xaaladaha adag.
7.Waxaa laga sameeyay UPS Caaga Fasalka VI Polypropylene.
8 Waxaa lagu heli karaa 0.5 ml, 1.5 ml, 2 ml
Dunta gudaha iyo dunta dibedda ee xulashada
9.U qaab hoose gudaha mugga ugu badan ee shaqada
10.Kaydinta heerkulka hoose: -196 ilaa 121 ℃
DNase-la'aan, RNase-la'aan, aan-pyrogenic
Lagu nadiifiyay heer SAL 10-6
MAYA. Mugga Sharaxaad Daboolka Xirxirida / Ctns Madhalays ka dhigida
PC0005 1.5ml Microtube taagan Serew 8000 Ikhtiyaar
PC0006 2.0ml Microtube taagan Serew 6000 Ikhtiyaar
PC0007 0.5ml Microtube taagan Serew 8000 Ikhtiyaar
Hore: Qalabka fayriska 'Viral DNA / RNA' (Magnetic Beads)
Xiga: Dhalo Reagent
Tubbada weelka '0.5ml Cryogenic'
Tuubada weelka ee 'Cryogenic vials'
Tuubada muunad qaadista